Location: musha » Kutumira » Nhau dzeWaya » Kuvandudza Hupenyu hweMedicare Varwere vane Kidney Chirwere Iye zvino
Zvirongwa zvinovavarira kudzikisira kufambira mberi kwechirwere cheitsvo uye kuwedzera kuwanikwa kwedialysis kumba uye kutapurirana itsvo.
DaVita Integrated Kidney Care (DaVita IKC) - pamwe chete navanachiremba veitsvo vangangosvika chiuru, vanorapa, varapi vezvipatara uye varapi vepamusoro - nhasi vazivisa kutangwa kwezvirongwa gumi nembiri zvekuchengetedza kukosha muUS, izvo zvinotarisirwa kusvika kunofungidzirwa kusvika zviuru makumi maviri nezvishanu. varwere. Zvinangwa zvezvirongwa izvi ndezvekubatsira kunonoka kufambira mberi kwechirwere cheitsvo (CKD) uye kubatsira varwere vazhinji vane itsvo kutadza kuwana kuisirwa itsvo uye dialysis mudzimba dzavo.
Zvirongwa izvi chikamu chehurumende itsva yekuzvipira yeKidney Care Choices (KCC) modhi - ratidziro yevalue-based care yakatanga musi waNdira 1, 2022, uye ichaita kwemakore mashanu ekushanda. DaVita IKC nevamwe vayo vari kutora chikamu muComprehensive Kidney Care Contracting (CKCC) sarudzo mukati meKCC.
Zvakafanana neyakapfuura yehurumende kukosha-kwakavakirwa kuchengetedza kuratidzira, CKCC inobvumira dialysis nzvimbo, nephrologists uye vamwe vanopa hutano kuti vaumbe itsvo-yakatarisana nekuzvidavirira masangano ekutarisira kutarisira varwere veMedicare. Chii chinoita kuti kuratidzira kweCKCC kuve kwakasiyana ndeyekuti inowedzera kukurudzira kwemari kutarisira varwere veMedicare vane CKD nhanho 4 ne5, kunonoka kutanga kwedialysis uye kukurudzira kuisirwa itsvo.
CKD inobata angangoita 1 mu7 (37 miriyoni) US vakuru. Zvinosuruvarisa, vanhu vazhinji vane CKD havazivi kushanda kweitsvo dzavo kuri kudzikira. Parizvino, inofungidzirwa kuti 50% yevanhu vakaonekwa kuti vane itsvo kukundikana "kuparara" mu dialysis-kutanga kurapwa pasina yambiro mumamiriro ezvinhu echimbichimbi. Kupunzika hakungokonzerese kushushikana kwemuviri uye mupfungwa kuvarwere asiwo kunodhura, paavhareji, imwe $53,000 pamurwere mugore rekutanga rekurapwa dialysis.
Zvimwewo, zvirongwa zvekuchengetedza zvakakosha zvakafanana zvakashanda zvakanyanya muhuwandu hwevarwere vanodiwa, vanodhura zvakanyanya, sevaya vane CKD uye kupera kwechirwere cheitsvo (ESKD). Zvirongwa zvakadaro zvinogonesa varwere, varapi uye zvikwata zvekuchengeta kubatsira kunonoka kufambira mberi kweCKD nekutonga zvirinani zvinhu zvine njodzi seshuga uye hypertension — izvo zviviri zvinotungamira zvinokonzeresa ESKD.
Kune varwere vari muchirongwa cheCKCC, DaVita IKC nevamwe vayo vanotarisa pakugadzirisa zviri nani zvido zvavo zveitsvo uye kwete-itsvo, pamwe nekuvandudza kupindira kwekubatsira kuchengetedza hutano uye kunze kwechipatara. Muchokwadi, kudzikisira kuchipatara hakungope varwere ava nguva yakawanda pamba vachiita zvavanoda asiwo kunogona kudzikisa mutengo wakazara wekutarisira-chiratidzo chechero chirongwa chakabudirira chekuchengetedza kukosha.
Nekuti zvirongwa izvi zvichasvika huwandu hwakasiyana hwevarwere veMedicare munzvimbo dzakawanda dzemaguta, DaVita IKC inoonawo mukana wekuenderera mberi nekubatsira kuburitsa hutano hukuru mukati mekutapurirana uye kuchengetedza itsvo zvakanyanya.
Nekutangwa kwezvirongwa zvayo zveCKCC, DaVita IKC inotarisira kuwedzera kaviri nhamba yevarwere vanowana hutano hwakabatanidzwa hweitsvo mugore rekutanga rekushanda chete. Pamusoro pezvirongwa zvayo zvakawanda zvakakosha-zvakavakirwa kuchengetedza zvirongwa zvine hutano kuUS, izvi zvinobatsira kufambisira mberi chinangwa cheDaVita IKC chekuunza mabhenefiti ekuchengetwa kweitsvo dzakabatanidzwa kune vese varwere.
Kutora chikamu kwaDaVita muzvirongwa zvekuchengetedza zvakakosha kunosimbisa kuzvipira kwayo kwese kubatanidza uye kushingaira kuvandudza ruzivo uye kutarisira padanho rega rega uye kurongedza rwendo rwekuchengeta itsvo. Parizvino, DaVita inotarisira varwere kubva kuCKD kuenda kuESKD kuburikidza nekuisirwa, uye inoita izvi zvisinei nekuti murwere anodialyse kumba, muchipatara kana mune imwe yenzvimbo dzayo dzekunze.
Skal International Forms Aid Committee yeUkranian...
Mukuru weEU anoona nezvekudzivirirwa kwemuganhu asiya basa nenyaya yemutemo...